Ny valan-javaboary Nahuel Huapi, Parque Nacional Nahuel Huapi - San Carlos de Bariloche
Amerika Atsimo Arzantina San Carlos de Bariloche
Toerana: Ny faritany Rio Negro sy Neuquén, Arzantina
Tanàna nosy: San Carlos de Bariloche, Villa la Angostura
Area: 7050 sq. km
Datam-pifanarahana: 9 Oktobra 1934.
Fitantanana ny fikambanana: Fitondram-panjakana nasionaly
Ny tranonkala ofisialy: nahuelhuapi.gov.ar
Any andrefan'i Arzantina no vala-pirenena tranainy indrindra ao amin'ny firenena - Nahuel-Uapi. Ny faritr'ity tontolo ity dia miampita faritra maromaro, izay misy fiantraikany be eo amin'ny sehatra biolojika. Tsidiho ny mombamomba azy dia mendrika ny hahita amin'ny mason'olona manokana ny harenan'ny zavamaniry sy ny tontolo voajanaharin'i Arzantina.
Tantaran'ny Nahuel-Uapi Park
Araka ny voalazan'ireo mpikaroka dia nanomboka 11 000 taona lasa izay ny fananganana. Ny tantaran'ny National Park Nahuel-Uapi dia mifandray amin'ny anaran'ny mpikaroka fanta-daza Francisco Moreno. Ho an'ireo sangany dia azony avy amin'ny governemanta 75 metatra toradroa. km amin'ny toerana voatokana. Tamin'ny taona 1903, ny mpahay siansa dia namerina ny tany ho an'ny fanjakana, ary efa tamin'ny taona 1934 dia niova ho faritra voajanahary izy ireo.
Nomena ny anaran'ny valan-javaboahin'i Nahuel-Uapi izy io, ho fanomezam-boninahitra an'ilay farihy mitovy amin'io anarana io, izay naharesy azy ireo. Amin'ny dikanteny avy amin'ny teny eo an-toerana dia midika hoe "takelaka jagoara" ny anarana.
Toerana fizika ny kianja Nahuel-Uapi
Io faritra fiarovana voajanahary io dia eo amin'ny sisin-tanin'ny faritanin'i Río Negro sy Neuquén . Izy io dia manodidina ny faritra 7050 metatra toradroa. km, izay manakaiky ny sisintanin'i Arzantina miaraka amin'i Chili. Ny faritanin'i Navel-Huapi dia mizara ho faritra telo miaro fiarovana samihafa, anisan'izany:
mivantana eo amin'ny zaridaina manana faritra 474.32 hektara manana fiarovana avo lenta;
tahirim-pirenena miaraka amin'ny faritra 160.686 hektara manana fiarovana mafonja;
Ny tahirim-pirenena ao Zona Centro sy Zona Gutierrez.
Ny toetran'ny National Park Nahuel-Uapi dia aseho amin'ny farihy, ala tsy azo idirana ary tendrombohitra be voninahitra, izay avo lenta dia 3,500 m. Eo amin'ny lafiny iray dia ala Valdivian, ary ny iray kosa - ny làlan'ny Patagonianina . Any avaratra, miankina amin'ny Lanin Park ilay valan- javaboary . Etsy ankilany ny Lake Naul-Uapi dia ny National Park Los Arrananes .
Nahavonjy ny Sehatrasan'ny Nahuel Huapi Park
Ao amin'ny faritanin'ity faritra voaaro ity dia misy zavatra voajanahary marobe izay mendrika manokana. Tonga any Naue-Uapi, azafady mba hijery:
ilay volkano maty ao Trondor , izay, na dia eo aza ny toe-javatra misy azy, dia manao feo mahagaga;
Glacier mihelina avy eny an-tendrombohitra;
Faras faritry ny haavony, feno rano avy amin'ny oram-panala tendrombohitra;
Farihin'i Nahuel-Huapi, mitongilana amin'ny hatsarany sy ny haben'ny fahatsarany.
Araka ny hevitry ny angano, i Nauelito, tranonkala ao an-drenivohitr'i Loch Ness, dia monina any amin'ny farihy. Any amin'ny fivarotana any an-toerana dia mahita loham-pifaliana be dia be ianao miaraka amin'ny sarin'ity taranaka dinôzôra ity.
Mialà ao amin'ny kianja Nahuel-Uapi
Ny fandinihana io faritra voaaro io dia mahavariana na amin'ny ririnina na amin'ny fahavaratra. Ny fidiran'ny mpizahatany betsaka indrindra dia hita hatramin'ny Desambra ka hatramin'ny Janoary. Amin'izao fotoana izao ao amin'ny Kianjaben'ny National Nahuel Huapi dia malaza ireto kilasy ireto:
mandeha amin'ny lakana, kayak ary lakana;
Ireo mpanohana ny toekarena momba ny tontolo iainana dia mandeha eny amin'ny valan-javaboary, mianatra momba ny natiora ary mifankahalala amin'ny alika kely. Ireo mpankafy fientanam-po dia nandeha nanao zava-niainana tao amin'ny sambo Modesta Victoria, izay nialàn'i Che Guevara indray mandeha. Amin'ny ririnina, ny ankamaroan'ny mpitsidika any amin'ny Valam-pirenena Naul-Uapi dia tonga any amin'ny havoanan'i Cerro Catedral, izay azonao aleha.
Ny ivon-toeram-pizahantany ao San Carlos de Bariloche , miorina eo amin'ny iray amin'ny Farihin'i Nahuel-Huapi, dia mikarakara fialam-boly.
Ahoana no ahatongavako any amin'ny kianjan'i Nahuel Huapi?
Ity faritra voaaro ity dia miorina eo andrefan'i Arzantina, eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Chili. Ny halaviran-dàlana avy ao Buenos Aires mankany Nahuel Huapi dia maherin'ny 1500 km, noho izany dia azo antoka sy azo ampiharina bebe kokoa amin'ny fiaramanidina. Isan'andro avy any an-drenivohitra dia manaisotra ny fiaramanidin'ny seranam-piaramanidina Aerolineas Argentinas sy LATAM Airlines, izay efa tany amin'ny 2,5 ora tany amin'ny seranam-piaramanidina ao San Carlos de Bariloche. Ady iray ora avy ao amin'ilay valan-javaboary.
Ireo mpizaha tany izay tia ny fiara fitaterana dia tokony handray ny RN5 na RN237. Amin'ity tranga ity, dia mandeha maherin'ny 16 ny dia.
Nankalaza ny Fetin'ny Flag ny mpanjaka soedoà: sary vaovao avy amin'ireo mpandova ny seza
Tafita amin'ny bodofotsy
Katie Holmes dia nialona an'i Jamie Foxx tamin'ny vahiny
Dress with strings
Miaraka amin'ny rindrina eo ambanin'ny vato
Ahoana ny fomba hikirakira ny tavy?
Tea miaraka amin'ny ranom-panafana mandritra ny fampinonoan-tena
Ireo kiraro avo lentan'ny vehivavy
Sagittarius olona - fifanarahana
Ahoana no nitondran'ny lehilahy Leo iray be fitiavana?
Vokatry ny henam-boankazo amin'ny antsantsa
Senada noho ny fahaverezan'ny lanjany
Fito hypoxia - fitsaboana
Ahoana no hisafidianana ireo rindrina sy tulle ho an'ny mpanatrika?
Balyk avy amin'ny karpoly volafotsy